गौरा गीतसँगको पिरती | Dinesh Khabar
गौरा गीतसँगको पिरती
२०७६ भदौ ४, ०७:०४
‘गौरा’ भन्ने बित्तिकै मनमा उत्साहका तरङ्गहरू तरङ्गित हुन्छन्। फरकप्रकारको सान र अभिमान भेट्टाउँछु आफैसित। गमराका खेलहरू खेल्न र हेर्न वर्षदिनदेखि प्रतीक्षा गरिरहेका धैर्यताका मनोकांक्षाहरू सीमा नाघ्ने गरी नै प्रस्फुटित हुन खोज्छन्, म समाह्लन सक्दिनँ आफ्नै रहरलाई ।
चैत, धमारी, भोलाउलो, ढुष्को, होरी, डेउडाका साथसाथै लैबिरे छम्क, खेलमेरो दर्कादरी, चौबन्दी आमै, च्याट्ट पुतलीजस्ता तमामौं खेलहरूमा स्वर मिलाउना कि हउस, पैतल मिलाउनाकी हाउस, अह ! अन्धेर छ यस मनको पनि गौरा सुदूर पश्चिमका खलामा मात्र लाग्दैन, हाम्रो कला बोकेका गलामा लाग्दछ । पानी भर्ने नाउलामा लाग्दछ । बाहुली जोडीजोडी शरीर मच्याउनेका बाहुलामा लाग्दछ । बिरुडा भिजाउने प्रत्येक तामाका ताउला ताउलामा लाग्दछ । गौरा परम्परा र संस्कृतिसँगै हाम्रो पहिचान जोडिएको छ ।
कौयौं पुस्तादेखि चली आएको गौरवगाथा बोकेको गौरा पर्व एक सभ्य संस्कारको इतिहास हो, आधुनिक कला, साहित्य र भाषाको माऊ हो र वर्तमान एवम् भविष्यको मार्गदर्शन हो, जहाँ अथाह ज्ञानका दिग्दर्शनहरू छन्, रहरका उन्मुक्त भावनाहरू छन् अर्तीउपदेशका सुक्ति र उक्तिहरू छन् । थालमा भात पस्किएजस्तै पस्की रहेका छन्, सींगो आदर्शजीवनका स्वागतयोग्य एवम् ग्रहणयोग्य दर्शनहरू।
भौदौको महीना आँगनको डिलहरूमा हल्किदै लागेका सयपत्री, टोक्करी, हजारी, मखमलीजस्ता फूलहरू, आँगनको तलतिर ठाङराभरि झुलिरहेका काँक्राका झुलहरू, घरगडाकै किनारमा उभिएको दाडिमको रूख, पसेरोमा नाचिरहेका पिँडालुका गाबाहरू, हरियो खुर्सानीका बोटभरि लटरम्म झुण्डिएका खुर्सानीका कोसाहरू, बारीमा रङ्गीन चौंवरीसँगै परिपक्क हुँदै गएका पोलिखाने घोगाहरू, खेतमा पोक्काउन लागेका धान, डाँडामा लागेको कुहिरो जोरजोरले उडिरहेको परिवेश जसरी पृथक पृथक छ त्यसरी नै गमरा खेलमा पनि रस र स्वाद फरक फरक छ ।
जब फर्सीका बेलाहरू झुल्लिएझैं झुल्लिन्छन् खेलकारीहरू तब शिवपार्वतीको जीवनलीला मात्रै चल्दैन, पुराना इतिहासका प्रसङ्गहरू मात्रै कोट्याइँदैनन्, अर्तीउपदेश र आध्यात्मिक वर्णनमा मात्र सीमित हुँदैनन् गीतका भाकाहरू । त्यहाँ त दूधेघोगाजस्तै मीठो स्वाद पाइन्छ, काँक्रोको जास्तै शान्त रस पाइन्छ, दाडिमका दान उफ्रिएजस्तै दाँत देखाएर पेट मिचिमिची हाँस्न मिल्दछ, फूलको सौन्दर्यले निम्त्याएको सुगन्धकोजस्तै सुवास फैलिन्छ युगौंयुग रहने गरी । धानका बाला पोक्काएजस्तै मनका रहरहरू पोक्किन्छन् र पोखिन्छन् पनि । पोखिएका रहरहरूमार्फत मनले शान्ति र आन्दानूभुति बटुल्दछ ।
यति मात्रै होइन काँचो पिँडालुको जस्तै कोकेइ लाग्दछ, खुर्सानीकोजस्तै च्वास्स पिरो लागन्छ । कतै ‘लो’ लागेको काँक्रोकोजस्तै तीतो अनुभूति पनि हुन्छ । आफूले गरेका, गर्दै आएका तथा अन्जाबस हुन गएका कमजोरीहरूलाई, गल्तीहरूलाई तथा असावधानीहरूलाई खिज्याइदिन्छन्, गमराका गीतहरूले । कहिलै कोकेइ लाएर, पीरो लगाएर त कतै तीतो अनुभूति गराएर । तब शुरू हुन्छन् आत्मग्लानीका भावहरू र तिनैसँग उब्जिन्छन् सचेतनाका दरिला आत्मविश्वासहरू । अनि उड्दछ मनको अज्ञानता भदौमा डाँडाको कुहिरो आकाशतिर उडेजस्तै ।
गौरा एक पर्वले अनेक रहरलाई समेट्न सक्नु यसको सबैको प्रिय हुन सक्नुको विशेषता हो । दृष्टिशक्ति र श्रवणशक्ति कमजोर भइसकेका हाम्रा मान्यजन वृद्धवृद्धाहरू पनि आँगनको एक छेउमा बसेर गौराका गीतहरू सुनी अन्तरआत्मादेखि नै मुस्कुराई रहेका हुन्छन् । उहाँहरूले गीतका पूरा अंश सुन्नै पर्दैन एक टुक्का सुन्ने बित्तिकै मनभित्र दौडी हाल्छन् खेलका रङ्गढङ्ग र छाँटकाँट ।
खेलकारूका त के कुरा गर्नु उनीहरुमा गासवासभन्दा पनि खेलकै अतास । जतिबेला डेउडा दोहरीमा पिरतीका प्रसङ्गहरू चल्दछन् त्यतिबेला लभमा फसेका तरुण तरुणीहरू आफ्नै कथा सम्झिन्छन् साँयद । जे होस् रतिरगाका रागात्मक प्रेमिल सुललित भावनाले सबैलाई प्रफुल्लित तुल्याउँछ त कहिलै प्रेमको उदाङ्गो प्रस्तुतिले उत्तेजना थप्दछ पनि । साना बालबालिकाहरू गमरा खेलको घेराबन्दी भित्र पसेर संगठित आकर्षण देखेर छक्क पर्छन् र बिर्सन्छन् बलगम पट्काउन र बेलुन उडाउन । धन्य छ ! गौरा तमरो कला र भुल्याउने तरिका ।
आँगनमा लागेका खेलहरूसँगै गौरा घरमा व्रतालु नारी पूजामा व्यस्त रहन्छन् । साउँ, धान, अपामार्ग, तील, दुबो, कुशजस्ता झारका जरा उखेलेर बनाएको पार्वतीको प्रतीकमा घुम्टो ओडाएर पूजा आराधनासहित जल चढाउँछन् र व्रतको सार सम्झदै आनन्द निम्त्याउँछन् व्रतालु नारीहरू । एक आचमन जलले जरा उखेलिएका बोटहरू त जाग्दैनन् तर त्योभन्दा बढी उपयोगी कहिलै नउजड्डे बोटहरू उम्रिन्छन् मनमा र कोही शीतल दिन्छन्, कोही हावा दिन्छन् कोही फल दिन्छन् र मान्छेलाई मानव बन्न प्रेरित गरिरहन्छन्, साँयद ।
गौराका अवसरमा पुराना इतिहास बोकेका राजरजौटा, देवीदेवता र भद्रभलादमी व्यक्तिका जीवनगाथा समेटिएका बोलहरू पनि खेलिन्छन् ढोलको तालसँगै । हाम्रा गौरवका पुराना कला, देवस्थान, वास्तुकला र माणौंको चिनारी दिने ज्ञानको पोथडो गीतमार्फत बाँडिन्छ सबैसबैलाई । राम शाहीको ढुष्को, जुमलीको ढुष्को, पाण्डवको ढुष्को, रामचन्द्रको चैत, गन्याप देवताको चैत, घण्टेश्वर देवताको चैत, मालिकाको चैत बाला गोविन्दकी चाँचरी, कृष्ण भगवानकी होरी, छैंटीमाइको भोलाउलो कति हुन् कति दशबाह्र दिनसम्म खेलिने गीतका लम्मार ।
यिनै गीतभित्र ज्ञानको लम्मार छ, मान्छेभित्रका अमानवीय भावलाई बिथोल्ले तडी छ र अचेल स्कूलमा पढाइने विद्याभन्दा दोब्बरकी अनौठी लेखापडी छ । आफूलाई ठूलो मानी घमण्ड देखाउनेले ‘भागेश्वर र नागी मल्लको चैत’ खेल्नु अनिवार्य छ । म कहिलै मर्ने होइन, मैले मात्र खानलाउन पाए पुग्यो भनी सोच्ने स्वार्थी मान्छेलाई ‘ऋतु खेल’ (मानिसैको दियोखायो सार छै ऋतु मानिस अम्मर काँ छ ?) खेल्दा मानिसको अनित्य चोलाको याद आउला र ऊ सुध्रेला । आँखिर सत्यकै जीत हुन्छ त्यसैले सत्यकै बाटो हिन्नुपर्दछ भन्ने सन्देश पाण्डवको ढुष्कोबाट प्रवाहित हुन्छ ।
आफ्नै निकटका व्यक्तिबाट पनि धोका मिल्नसक्छ है भन्ने सुइँको ‘भीमदत्त पन्तको चैत’बाट थाहा हुन आउँछ । नैतिकहीन हुनलागेका, आफ्नो इज्जत र बेइज्जतको ख्याल नगर्ने वर्तमान समयको समाज र व्यक्तिलाई गौरामा खेलिने प्रत्येक गीतले प्रत्येक ठाउँठाउँमा गिज्याएको छ । अब यो खिज्याएको सहने वा नसहने कुरा व्यक्तिमा भरपर्दछ । गौरामा खेलिने सबै गीत मुटु छुने छन् । मुटु थर्काउने छन् । अज्ञानतालाई भड्काई भड्काई फर्काउने छन् । भावनात्मक छन् , कारुणिक छन् र उच्च मानवीय मूल्य बोकेका छन् ।
गौरा सेलाउनुभन्दा अगाडिको रातमा खेलिने रतेडीको आनन्दमा मग्न हुनुको मजा बेग्लै छ । तुलछाका गीतसँगै कटाइएका रात साँच्चिकै यादगार र सार्थक लाग्छन् मलाई । रैखीय ढाँचामा वर्णित कौतुहलपूर्ण कथात्मक तुलछाका गीतमा वर्णित पात्रसँगै सहयात्रा गर्न मन लागिरहन्छ ।
बलिभद्रले गरेको कोशिश, उनले हिडेको बाटो र घटुली तद्दे तारमा आफू पनि सँगै भएको आभास हुन्छ । यस गीतमा तुलक्षीको महत्त्वलाई यसरी व्याख्या गरिएको छ कि जुन अहिलेका वैज्ञानिकले अनेक परीक्षण र अध्ययन गरी निकालेको निचोडभन्दा गहन छ । तुलछाका गीतमा मात्र होइन गौराका हरेक गीतमा व्यवहारिक एवम् जीवनोपयोगी ज्ञानको थुप्रो छ । त्यही ज्ञानलाई ग्रहण गर्न सक्ने हो भने पनि जीवनले जीवनको महत्त्व बुझ्ने छ ।
गौरा सेलाउने दिनका दृष्यहरू पनि कम कारुणिक लाग्दैनन् मलाई । पार्वतीको प्रतीकको रुपमा रहेकी गौरालाई मानविकीकरण गर्दै गरिएका व्यवहारहरूले हृदयमा एकप्रकारको भावोत्पन्न गराउँछ र मलाई लाग्छ यी गौरा होइनन् यी मेरी दिदी हुन्, बहिनी हुन् या चेली नै हुन् ।
चेलीबेटीलाई विवाहको दिन कन्यादान गरी घर पठाउँदा जस्तो आभास हुन्छ आमाबुवालाई, त्यही भावना छाउँछ, हृदयमा र त सबैमा कारुण्य भावले अधिपत्य जमाउँछ । जसरी विवाहको दिन चेलीबेटीलाई आफन्तको अँगालोबाट छुटाउन मुस्किल पर्छ त्यसरी नै गौरा खेल पनि छोड्न मुस्किल पर्दछ । खेलकारूहरू खेलमै आग्रह गर्दछन् खेल छोड्न र गौरालाई आफ्नो घर जान तर गौरा सितिमिति मान्दैनन् :
आँगनीको खेलमाल छाड गमरादेवी लोक झुकाइ जनमार
जब मेरा बाबज्यू भरपुर दाइजो दिन्ना तब छाडु आँगनी खेल ।
गौराको विधिवत विदाईमा दिनुपर्ने भरपुर सामग्रीहरू दिइन्छ तब पनि गौरा जान मान्दैनन् । त्यसमा भुल्याई फकाई पठाएको परिवेश साँच्चीकै कारूणिक बन्दछ ः
एकली नैजानो इजु मायो एकली नैजानो
वावैनैको बेटो लैजा साथ गमरादेवी अघिअघि वेद सुनालो ।
जय गौरा !!
मदन भट्ट … विस्तृतमा
धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई प्रदेश सभा सदस्य कुमारीनन्द बमले प्रश्न गरेकी छन्। उनी प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसबाट प्रदेश सभा सदस्यमा समानुपात … विस्तृतमा
जीवनमा पहिलो प्रेम त आमालाई नै गरेहुँला! तर त्यो अनुभूति सम्झना छैन। म जति जति ठूलो हुँदै गए आमालाई भुल्दै भुल्दै गैरहें। एकै छानामुनि भएर पनि आज आमाको संसार र मेरो संसार नितान्त फरक छन्। … विस्तृतमा